IntelliScreenX 7 beta ayaa loo heli karaa macruufka 7.1.x | Wararka IPhone
IntelliScreenX 7 Beta oo loogu talagalay iOS 7.1.x hadda waa la soo dejin karaa (Cydia)
Intelliborn ayaa lagu daabacay Cydia mid cusub beta ka soo caan baxay Tweak IntelliScreenX 7, kiiskan wuxuu la jaan qaadayaa qalabka Jailbreak laga sameeyay mid ka mid ah Noocyada macruufka 7.1.x. Xusuusnow in Jailbreak Pangu ilaa nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Apple ee aaladaha mobilada, macruufka 7.1.2. IntelliScreenX7 waa Tweak ku dhex jirta Shaashadda Qufulka iyo Xarunta Ogeysiinta ka soo qaad iPhone-keena taxane ah oo aan ku xakameyn doonno emaylka, shabakadaha bulshada sida Facebook iyo Twitter, akhristaha RSS, farriimaha iyo Jadwalka iyo dhammaan dhacdooyinkiisa oo ay ku jiraan.
Xaqiiqdii IntelliScreenX 7 waa mid ka mid ah Tweaks ugu fiican si loo ballaariyo isdhaafsiga qalabkayaga adoo ku daraya taxane ah shaashado quful aad u dareen badan oo wax soo saar leh oo yareynaya waqtiga udhaxeeya codsiyada. Isticmaalka tilmaamid Ku saabsan ogeysiinta shaashadda qufulka ama Xarunta Ogeysiiska toos noo geyn doonta arjiga jawaab deg deg ah ama daawasho. IntelliScreenX 7 waa Tweak la bixiyo oo leh a qiimaha 4,99 dollars.
Nooca cusub ee IntelliScreenX 7 waa lambar ISX 7.10.3 oo aan kala soo baxno waa inaan kudar font dheeraad ah CydiaHaddii aynaan tan tixgelin, waxaan heli doonaa oo keliya Tweak aan ku habboonayn noocyada iOS 7.1.x. Liistada ilaha Cydia waxaan ku dari doonaa cinwaanka soo socda: http://intelliborn.com/betaisx ka dibna waxaan heysan doonaa nooca beta cusub ee la heli karo si aan u soo dejino. Xusuusnow in ahaanshaha nooca beta uusan wali aheyn Tweak gebi ahaanba iyo waxaa ku jiri kara cayayaanka qaarkood taas waa la hagaajin karaa ka hor intaan la helin nooca ugu dambeeya.
Ma isku dayday IntelliScreenX 7 beta? Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » IntelliScreenX 7 Beta oo loogu talagalay iOS 7.1.x hadda waa la soo dejin karaa (Cydia)
Raul Diaz Mallol dijo
Waad ku mahadsantahay digniinta Alex !! Waxaan sugayay inay cusbooneysiiso. Aan la raacno Pangu xagga sare markaa !!
Jawaab Raúl Díaz Mallol
Waad salaaman tihiin wanaagsan, waad isla rakibi kartaan lockinfo 7 iyo intelliscreen 7 isla markaa isla markaana wax khilaaf ah ha abuurin, mahadsanidiin.
Samsung waxay noogu yeertaa 'darbiyada hab qabka' xayeysiinkeedii ugu dambeeyay